RASMI: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Saxiixa Weeraryahan Antoine Griezmann Ka Dib Markii Ay Bixiyeen 120 Milyan - Gool24.Net
RASMI: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Saxiixa Weeraryahan Antoine Griezmann Ka Dib Markii Ay Bixiyeen 120 Milyan
Barcelona ayaa goor dhow si rasmi ah ugu dhawaaqday inay weeraryahanka Faransiiska Antoine Griezmann kala soo wareegtay kooxda Atletico Madrid ka dib markii ay bixiyeen lacagta lagu burburin karay qandaraakiisa Atletico.
Qareenka Griezmann ayaa goor sii horeysay waxa uu xarunta La Liga geeyay lacagta ay Barcelona bixisay ee lagu burburinay qandaraaska Griezmann oo gaareysa 120 milyan euro.
Antoine Griezmann oo 28 sanno jir ah ayaa si rasmi ah u noqday haatan ciyaaryahan Barcelona ah. Waxa uu kooxda u saxiixayaa qandaraas shan sannadood ah iyadoo Barcelona ay duldhigi doonto in qandaraaskiisa lagu burburin karo 800 milyan euro.
Saxiixaan ayaa soo gabagabeynayaa warar xan ah oo socday muddo labo sannadood ah iyadoo wararka la xiriira mustaqbalka Griezmann uu cirka isku shareeray bil iyo bar ka hor ka dib markii uu shaacay 14kii bishii May inuu ka tagayo Atletico Madrid xagaagan.
Atletico waxay aheyd kooxdii labaad ee uu Griezmann u ciyaaro ee La Liga isagoo uga soo biiray Real Sociedad oo ay ku soo iibsadeen 24 milyan euro, waana kooxdii uu ku soo baxay ka dib markii ay diideen kooxo badan oo Faransiis ah.
Atletico Madrid kama aysan celin karin inuu baxo xagaagan madaama lacagta lagu burburin karay qandaraaskiisa ay hoos u dhacday 1dii bishaan July iyadoo markii hore ay aheyd 200 milyan euro balse noqotay 120 milyan euro.
Barcelona ayaan taageerayaasha u soo bandhigi doonin Griezmann madaama ay shaqo ka socoto garoonka Camp Nou islamarkaana garoon yaraha ka soo horjeeda ay ka socoto bandhig madadaalo ah.
Sidoo kale taageerayaasha Barcelona ayaa cuqdad u haya xiddiga Faransa madaama uu dukumiintiri ka sameeyay markii uu kooxda iska diidayay xagaagii hore isagoo markaas shaaciyay inuu sannad kale sii joogayo Atletico.
Ugu danbeyn haatan waxa uu u soo wareegay Camp Nou iyadoo kulankiisa ugu horeeya uu noqon doono kulanka koobka Joan Gamper ee 4ta bisha Agoosto markaasoo ay la ciyaarayaan Arsenal.